Napetraky ny fitondram-panjakana fa tsy misy mahazo mivoaka ny trano, ary raha andeha hiatsena aza dia olona iray ao an-tokatrano ihany no mahazo mivoaka arak'izay fandaminan'ny Kaominina sy ny Fokontany, izany dia mihatra avy hatrany ho an'Alamanga sy Toamasina. Ireo mpiasan'ny orinasa tsy miankina kosa dia arakaraky ny tompon'ny orinasa sy izay fandaminan'ny ministera no tsy hiasany.
Efa mandeha an-tongotra ireo mpiasan'ny orinasa tsy miankina, ary efa matahotra ny hifindran'ny valanaretina na eny an-dalana na any am-piasana, nefa izao tratran'ny antsonjay hoe esorina amin'ny fotoanan'ny congé na ny zo tsy fiasana isan-taona ho an'ireo izay tsy amonjy fiasana.
Ireo mpampiasa koa anefa milaza ny tsy izaka irery ny fatiantoka sy ny karaman'ny mpiasa tsy afaka miasa satria ny orinasa efa samy sahirana avokoa.
lundi, 23 mars 2020 12:54
Coronavirus: Niverina ny jonobotry sy ny taxi kilandy ary ny taxi-moto
Taorian'ny fanapahan-kevitry ny fitondrana ny ampiato ny fiara fitaterana iombonana sy ireo taxi, nefa ireo mpiasam-panjakana ihany no mijanona an-trano fa ireo manao velon-tena sy mpiasa orin'asa tsy miankina dia tsy maintsy mamonjy ny asany, dia tazana ireo fiaran'olon-tsotra lasa nivadika nanao taxi clandestin na jonobotry mitambatambatra saram-pitaterana.
Maro ihany koa ireo moto izay mizara ny laharana finday mihitsy maka sy manatitra mpiasa.
Mahatsiaro voan'ny tsindrian'ila ihany ireto mpitatitra nefa tsy misy fanonerana ny banga na fanamaivanana ny hetra izay tsy maintsy aloa amin'ny faran'ny volana marsa izao.
lundi, 23 mars 2020 12:50
Coronavirus: Nosintomin’ny Polisy avy hatrany ny taratasin’ny Taxi na Taxi-be tratra mitondra olona
Nosintonin’ny Polisy avokoa ireo taratasy fahazoan-dalana ny fiaran'ireo Taxi na Taxi-be tratra mitondra olona nivezivezy teto Antananarivo renivohitra nanomboka tamin’ity maraina ity. Izany dia ho fanatanterahana ny didy navoakan'ny fitondram-panjakana amin'ny tsy tokony hisian'ny fiara iombonana miasa na koa ireo taxi hifehezana ny fiparitahan’ny valanaretina coronavirus.
Voakasik’ity fepetra ity ny faritra Analamanga sy ny tanànan’i Toamasina
« Tsy misy intsony ny fanentanana fa ny sazy avy hatrany no mihatra ho an'izay minia mandika lalàna ho fiarovana ny ain'ny vahoaka », hoy ny avy eo anivon’ny Polisim-pirenena.
1/ Mijanona tanteraka ny fitateram-bahoaka an-tanan-dehibe sy ny zotra Nasionaly mampifandray an'Antananarivo sy ny Faritra.
2/ Mijanona avokoa ny fitaterana Taxi-be, fiara-karetsaka na Taxi, Taxi-brousse
3/ Hatsangana ny « Barrière Sanitaire » ivelan' Antananarivo sy ny an-tanan-dehibe rehetra manerana ny Nosy.
4/ Ny toera-pivarotana Tsena-lehibe na Grande Surface, Ny Mpamongady na Grossiste, ny Tsenakely na Épicerie sy ny tsenam-pokontany (06 ora maraina ka hatramin'ny 12 ora atoandro ary olona iray ihany isan-tokantrano no mahazo mientsena izay harindran'ny kaominina sy ny fokontany) ihany no misokatra.